“Herinandron’ny teny frantsay” : marobe ny hetsika karakarain’ny AFT | NewsMada
“Herinandron’ny teny frantsay” : marobe ny hetsika karakarain’ny AFT
Par Taratra sur 13/03/2018
Toy ny isan-taona, manamarika ny “Herinandron’ny teny frantsay sy ny frankofonia” isika eto Madagasikara. Ny 17 marsa hatramin’ny 24 marsa izany, ho an’ny amin’ity taona 2018 ity. Marobe ireo hetsika karakarain’ny Alliance française (AFT) etsy Andavamamba, mandritra io herinandro miavaka io.
Hanombohana ireo ny atrikasa mitohy mikasika ny fanoratana lahatsoratra ahitana ireo “teny folon’ny frankofonia”. Natao ho an’ny ankizy 10 hatramin’ny 14 taona ny fiofanana ka isaky ny alarobia sy asabotsy izany ary manomboka rahampitso hatramin’ny 31 marsa izao. Hosantarina ny 17 marsa kosa ny fampirantiana “Dis-moi dix mots”, ao amin’ny AFT hatrany io ary tsy hifarana izany raha tsy ny 25 marsa.
Etsy ankilan’izay, mbola misokatra hatramin’ny androany 13 marsa ny fisoratana anarana amin’ny fifaninanana soratononina amin’ny teny frantsay na ny “Dictée de la francophonie”. Hotanterahina ny 17 marsa kosa ny fifaninanana.
Anisan’ny hampiavaka ny “Herinandron’ny teny frantsay sy ny frankofonia” amin’ity taona ity kosa ny fampirantiana mikasika ireo sakafo mampiavaka ny nahandron-dry zareo Frantsay. Marihina fa harena mampisongadina azy ireo maneran-tany mihitsy ity sehatra iray ity. Hatao ny 21 marsa tontolo andro kosa izany.
Ny ampitson’io, ny 22 marsa, hisy ny famelabelaran-kevitra miompana amin’ny hoe “Ny toeran’ny teny frantsay eo amin’ny fampianarana”, iarahana amin-dRakotonaivo Julien sy Rajaonarison Bruno. Ny tolakandro kosa, misokatra ny kilalao, “Chasse aux mots”, ho an’ny ankizy sy ny tanora.